Nepali Sajha, Author at Nepali Sajha - Page3of 1843
Nepali Sajha - page 3
महिला विश्व टी–२० छनोटमा नेपाल र थाइल्यान्ड भिड्दै
Published on November 19, 2017 in नेपाली by Nepali Sajha
Sponsored Link: नेपालले आइसिसी महिला विश्व टी–२० एसिया छनोट प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा आयोजक थाइल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपाली समयअनुसार दिउँसो पौने एक बजे थाइल्यान्डको टेडथाई क्रिकेट मैदानमा हुने खेलका लागि नेपाली टिमले बंगालदेशमा तयारी गरेको थियो। एक महिनाको छोटो तयारीमा बैंकक पुगेको नेपालले छनोट हुने लक्ष्य बनाएको छ। अघिल्लो वर्ष थाइल्याण्डविरूद्ध खराब प्रदर्शन गरेको नेपाली टिमका…
प्रकाश दाहालको मृत्यु : गाली गर्नेलाई गाली, ‘मृत्युपछि नानाभाँती भन्नु हुँदैन!’
Sponsored Link: आइतबार एकाबिहानै फैलिएको खबरलाई धेरैले सुरुमा त फेसबुकमा देखिने फेकन्युज ठाने। हुन पनि उनीमात्र हैन कयौँ नेताको मृत्युको खबर यसैगरी फेकन्युज बनाएर फेसबुकमा छ्याप्छ्याप्ती बनाइएको थियो। तर यो रियल न्युज थियो। साँच्चिकै प्रचण्ड पुत्र प्रकाश दाहालले धर्ती छाडिसकेका थिए। मृत्युको बखत उनको निकटमा कोही भएन। बिहानै उठ्ने छोरा ढिलासम्म नउठेपछि हेर्न गएकी आमाले…
काठमाडौंको वायुमा क्यान्सर, हृदयाघात, मस्तिष्कघात गराउने कण
Sponsored Link: ३ मंसिर, काठमाडौं । वर्षात् सकिएर काठमाडौंका सडकहरु हिलाम्यबाट धुलाम्यमा परिवर्तन भएका छन् । पानी पर्न रोकिएसँगै वायु प्रदुषणको मात्रा उकालो लागेको छ । उपत्यकाको वायुमण्डलमा हानीकारक रसायनहरुको मात्रा प्रशस्त भेटिन थालेको छ । उपत्यकाका ६ स्थानमा राखिएका वायु प्रदुषण मापक यन्त्रहरुको रिपोर्ट हेरौं । भैंसेपाटी क्षेत्रमा अहिले करिब ५० माइक्रोग्राम धुलो देखिन थालेको…
पाँचथरमा बसन्त नेम्बाङ र भीष्म आङ्देम्बे को बलियो ?
Sponsored Link: ३ मंसिर, पाँचथर । पहिलो चरणमा निर्वाचन हुन लागेको पाँचथर जिल्लाको राजनीतिक चहल-पहल उत्कर्षमा पुगेको छ । यहाँबाट प्रतिनिधिसभाका लागि वाम गठबन्धनबाट एमाले नेता वसन्तकुमार नेम्वाङ उठेका छन् भने लोकतान्त्रिक गठवन्धनबाट कांग्रेस नेता भीष्मराज आङदेम्वे चौथोपटक चुनावी मैदानमा छन् । पाँचथरको चुनावको रोचक कुरा के छ भने यी दुई बलिया उम्मेदवारवीच यसअघि एक…
यसरी अस्ताए कमरेड साकार‘प्रकाश दाहाल’
Sponsored Link: हृदयघातका कारण निधन भएका पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका छोरा प्रकाश दाहालको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्यष्टि गरिएको छ । प्रकाश दाहालको पार्थिक शरीरमा बुबा पुष्पकमल दाहालले दागवत्ती दिएर अन्त्येष्टि गरिएको हो। यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम…
Previous 12345 … 1,843 Next